September 2017 – Allpuntlander.com
September 22, 2017 October 13, 2017 admin1
Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Kenya Amina Maxamed oo khudbad ka jeedineysay shirka Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ayaa waxa ay ku baaqday in laga qeyb qaato sidii nabad loogu soo daabuli lahaa Soomaaliya. Amina waxa ay sheegtay in waddanku uu la kulmay xasillooni daro tobankii sano ee ugu dambeysay, taasi bedelkeeda ayay ugu baaqday xubanaha ka soo qeyb galay shirka QM in ay kordhiyaan taageerada Soomaaliya. Waxay sheegtay in Muqdisho ay hada u furan tahay ganacsiga, loona baahan yahay maalgashadayaashu in ay tagaan, si kor loogu qaado kobaca…
Hirshabeelle oo la safatay Dowladda Fedraalka, Sheegtayna inay Xaq u leedahay…
September 22, 2017 admin1
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in dowlada dhexe ay awood dastuuri ah u leedahay iney hagto siyaasada arrimaha dibeda ee Somalia. Waxaa uu ku taliyay in la dhowro dastuurka dalka u yaalla oo uu xusay inuu qeexayo awoodaha dowlada dhexe iyo Maamul goboleedyada kala leeyihiin, isagoo tilmaamay iney haboon tahay arintaas inaan hadda xiisad laga abuurin. “Hagida siyaasada arrimaha dibeda waxaa iska leh dowlada dhexe doorka uga furan maamul goboleedyada waa talo bixin iyo farsamo.”ayuu yiri Madaxweyne Waare oo la hadlay idaacada VOA. “Mowqifka…
Wakiilka Midawga Afrika oo sheegay in ay Korortay Carruurta Soomaaliya lagu Askareeyo
Wakiilka Midawga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjire Francisco Madeira, oo la hadlayay illaa 60 sargaal oo Soomaali ah oo tababar loo soo xiray ayaa sheegay in caruurta oo colaadaha loo adeegsado ay ku badan tahay gudaha Soomaaliya. Danjire Francisco Madeira waxaa uu xusay in caruur badan oo Soomaaliyeed in dagaalada loo adeegsado oo la askareeyo waxaana uu xusay in inkastoo uu hayn tiro rasmi ah haddana ay jiraan caruur badan oo hubaysan sida uu yiri. Wakiilka Midawga Africa ee Soomaaliya waxaa uu hadalkiisa ku sheegay in Xarakadda Al-Shabab ay…
PUNTLAND OO MAMNUUCDAY LIBAAXA INDHO-BUURKA IYO ISTICMAALKA SHABAAGAHA CAAGA
Masuuliyiinta ugu sareysa Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa mamnuucday qabashada libaaxa indho-buurka iyo isticmaalka shabaagaha caaga ah, kadib markii warbaahinta ay shir saxaafadeed ku qabteen xafiiska wasaaradda ay ku leedahay magaalada Bosaso. sida oo kale masuuliyiintan aya warbahainta u qeybiyey dikreeto lagu mamnuucayo adeesiga shabaagaha caaga iyo qabashada libaaxa indho-buurka, waxayna dikreetadasi u qornayd sidan: Ku: dhammaan shirkadaha qalabka kalluumeysiga. Ku:Dhammaan dalladaha iyo ururada kalluumeysiga. Ku: Taliska ciidanka boliiska Puntland. Ku: Ciidanka badda Puntland. Ku: Wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Ku: Wasaaradda Dekadaha iyo gaadiidka badda Puntland. Ku: Wasaaradda…
FAAHFAAHIN kasoo baxaysa weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay duleedka Gaalkacyo.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar maleeshiyo ka soo jeeda dhinaca Galmudug ay ku qaadeen baabuur ka yimid deegaanada bariga magaalada Gaalkacyo, kuna sii jeeday magaaladaas. Ilaa hadda dhimashada 4 qof ayaa la xaqiijiyey oo ay ku jirto Haweeney, Wiil iyo Aabihiis iyo nin kale, waxayna dhamaantood ahaayeen dad rayid ah. Sidaas oo kale dhaawacayo ka dhashay weerarkaas ayaa la geeyey gudaha magaalada Gaalkacyo, waxaana aan jirin ilaa hadda cid katirsan labada maamul oo ka hadashay. Warar laga helayo deegaankii uu ka dhacay falkan ayaa sheegaya in ay…
DHAGEYSI XASAASI AH: Gudoomiyaha G Mudug iyo Waxgaradka Gaalkacyo oo ku dhawaaqay in ay iska difaaci doonaan weerarada Galmduug
Gudoomiyaha gobalka Mudug ee Puntland oo ay wehliyaan qaar kamid ah Nabadoonada gobalka Mudug ayaa si adag uga hadlay xaaladdaha ka taagan magaalada ee dilalkii u dambeeyey. Gudoomiyaha gobalka Mudug ayaa sheegay in ay Galmudug u muuqdaan in aysan rabin iyo nabadda, aysana diyaar u aheyn arrimaha hadda taagan. Waxgaradka ayaa sheegay in ay iska difaaci doonaan wax kasta oo duulaan ah ugana yimaada dhinaca Koonfurta magaalada Gaalkacyo. HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO Shire Garee Wararkeena
What goes into a blog post? Helpful, industry-specific content that: 1) gives readers a useful takeaway, and 2) shows you’re an industry expert. Use your company’s blog posts to opine on current industry topics, humanize your company, and show how your products and services can help people. Shire Garee Wararkeena
Wararka Maanta1 Comment